Villa Soomaaliya Hadmay Miyirsan Doontaa?.W/Q. Xuseen Cali Nuur
Thursday October 14, 2021 - 01:24:56 in Maqaallo by Super Admin
Heerka garasho ee bini’aadamku wuu kala duwan yahay. Wuxuu ku kobcaa aqoonta iyo waayaha. Wuxuu ku kala duwan yahay hadba sida loogu dhaqmo, oo noqon karta mid waxtar ama mid waxyeello leh, mid Caddaalad ku dhisan iyo mid Caddaalad darro ku dhaqanta.
ALLE ha u naxariistee Marxuum- Faarax Galooley, oo u dhashay Gobolka Banaadir- labadii Ra’iisul-wasaare ee ugu horreeyey xornimadii lixdankii ka bacdi, markay Villa Soomaaliya magacowday, wuxuu yidhi; "Cabdirashiid iyo Cabdul-rasaaq mooyaane inta kale ma Rooti baa” Labadaas Ra’iisul-wasaare waxay u dhasheen gobolka Bari ee Soomaaliya.
Laba sanno kadib 1969kii Golihii sare ee kacaanka ee uu hoggaaminayey Maxamed Siyaad Barre, ayaa Villa Soomaaliya inqilaab ku qabsaday.
Muddadaas Marxuum-Faarax Galooley qaab siyaasadeedkii iyo doorashooyinkii markuu ka yaabay wuxuu yidhi "Nin Dooran bay na leeyihiin Doorta”
Marka shacbiga Soomaaliya ay fahmaan in Villa Soomaaliya ay ka dambayso kala qaybsanaanta iyo iska-hor-imaadka shacbiga iyo gobollada dalkooda.
Marka la joojiyo farogelinta Villa Soomaaliya ku hayso Garsoorka iyo Baarlamaanka.
Marka lagu qabso Fiilada in Banaadir ay noqoto gobol sida gobollada kale ee dalkaasi.
Ugu dambeyn waxaan leeyahay Villa Soomaaliya waxay miyirsan doontaa marka shacbiga dalkaas ku nooli ay ogaadaan in fikirka fiiladaasi yahay mid u eg "Dameerkii lagu yidhi Beri baa darane bur dhaaf, ee ugu jawaabay ‘yaab dabaddey dareemaba bixi